डिप्रोक्स लघुवित्तको सेयर आजदेखि लिलामीमा बिक्री खुला, आबेदन दिन कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » डिप्रोक्स लघुवित्तको सेयर आजदेखि लिलामीमा बिक्री खुला, आबेदन दिन कहाँ जाने ?
काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको आइतबार देखि १५ हजार ९६९.६४ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री खुला भएको छ । लगानीकर्ताले लिलामीमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० ले भाग जाने सबै कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो लिलामीमा सेयर किन्न आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार ११ गते तोकिएको छ । डिप्रोक्सले हकप्रद निष्कासनका बेला नबिकेको सर्वसाधारण समूहको सेयर लिलामीमा बिक्री खुला गरेको हो । यसअघि डिप्रोक्सले चैत ७ देखि वैशाख २५ गतेसम्म २५ लाख ७९ हजार २३८.४५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो ।
लगानीकर्ताले लिलामीको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ नक्साल काठमाडौंमा पुग्नेगरी बोलपत्र फारम बुझाउनु पर्नेछ । बोलपत्र असार १३ गते दिउँसो ३ बजे नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ नक्साल काठमाडौंमा खोलिनेछ । डिप्रोक्सको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा चुक्ता पुँजी ३४ करोड ८१ लाख ९७ हजार १९० रुपैयाँ छ । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले २० करोेड ८५ लाख ८१ हजार ८८२ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ ९० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २११ रुपैयाँ ९१ पैसा छ ।
प्रकाशित : Sunday, June 18, 2017
बाबुराम र नारायणकाजीको क्षेत्रमा मतगणना सुरु, बाबुरामले खाता खोले, नारायणकालीले लिए अग्रता !